05:18:33 pm 24-May-2022
विश्वका लागि ७ महत्वपूर्ण प्रश्नः युद्धविरामपछि पनि युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्न सक्छ ? कुन कुन देश युद्धको खतरामा छन् ?
युवा पोस्ट, माघ १३, २०७८, बिहीबार,
रुस र युक्रेन तनावका कारण युद्धको चरम सीमामा पुगेको विश्वले पेरिसबाट राहतको खबर ल्याएको छ । दुवै देश युद्धविराममा सहमत भएका छन् । तर, यो युद्धविराम अस्थायी हो । युद्ध रोक्न कूटनीतिक पहल भैरहेको छ तर आम जनताको मनमा अझै धेरै प्रश्नहरु घुमिरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि, के रूसले अझै युक्रेनमा आक्रमण गर्नेछर ? युद्ध भयो भने सिमानामा मात्र सिमित हुन्छ कि सहरसम्म पुग्छ ? के यसले अन्य देशहरूलाई धम्की दिन्छ? पुटिन किन फेब्रुअरी २० सम्म युद्ध स्थगित गर्न चाहन्छन् ? युद्धविरामपछि पनि रुस–युक्रेनमा युद्ध भयो भने तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुन सक्छ ? नाटोको यो युद्धमा हाम फालेपछि सारा विश्वको नजर यही विषयमा केन्द्रित भएको छ । हामीले त्यस्ता ७ प्रश्नहरू चयन गरेका छौं
१.रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्न सक्षम हुनेछ?
युक्रेनको अवस्थाबारे जानकारी लिएर फर्किएका बीबीसी पत्रकार पल एडम्स भन्छन्- युद्ध अझै टार्न सकिन्छ भन्ने आशा छ । यदि रुसले निरन्तरता पायो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा पनि राम्रैसँग थाहा छ । पुटिनलाई थाहा छ यदि युद्धको दायरा बढ्यो भने चीनले उनलाई खुलेर समर्थन गर्दैन। अमेरिका र नेटोको रुसले सैन्य शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ तर आर्थिक मोर्चामा यसको विनाशको मोहर लगाइनेछ ।आजीवन राष्ट्रपति बन्नका लागि पुटिनले संविधान संशोधन गर्ने कदम चाल्दा यो मुद्दा फेरि उठ्नेछ र उनले देशभित्रै राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । निसन्देह , तिनीहरूलाई पनि यी सबै कुरा थाहा छ। त्यसैले अहिलेसम्म धम्की मात्रै दिइदै गएको छ ।
२.युद्ध सिमानामा मात्र हुनेछ कि शहरहरूमा समेत पुग्छ?
एक रिपोर्टका अनुसार सोभियत संघ टुटेपछि युक्रेन रुसपछिको सबैभन्दा ठूलो देश बनेको छ । यदि युद्ध भयो भने त्यो सीमामा मात्र सीमित हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी कसैले दिन सक्दैन । कारण युक्रेनसँग युद्धमा अमेरिका र नेटो जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू पनि हुनेछन्। यदि रुसमाथि दबाब बढ्यो भने उसले युक्रेनका सहरलाई पनि निशाना बनाउन सक्छ । उसले उसलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा नष्ट गर्ने प्रयास गर्नेछ। तर, नाटो र अमेरिकाको उपस्थितिले यसलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न सक्छ। किभमा एन्टी-ट्याङ्क मिसाइल र वायु रक्षा प्रणाली पहिले नै तैनाथ गरिएको छ। तर, रुसले युक्रेनलाई तीन तर्फबाट दबाब दिइरहेको छ ।
३.आक्रमण गर्दा कति जना मारिनेछन् ?
‘द भोग’का अनुसार यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यसको जवाफ दिन गाह्रो छ। सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेर क्रिमियालाई गाभेको थियो । त्यसयता कुनै न कुनै युद्धमा १४ हजार युक्रेनीहरू मारिएका छन्। जसमा सैनिक र सर्वसाधारण पनि छन् । रुससँग २९ लाख र युक्रेनमा ११ लाख मात्रै सैनिक छन् । दुवै देशको जनधनको ठूलो क्षति हुनेछ । त्यसपछि आगलागी सहरी क्षेत्रमा पुग्यो भने त्यसको नतिजा झनै भयावह हुन्छ । युक्रेनमा धेरै संस्थाहरू छन् जसले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कामदारहरूको रूपमा काम गर्न तयार छन्। तिनीहरू समेत कसरी सुरक्षित रहनेछन्? ठुलो प्रश्न हो यो
४.युद्ध भए कति देश प्रभावित हुनेछन् ?
बीबीसीका पल एडम्स यसलाई ठूलो खतरा मान्छन्। उनका अनुसार युद्ध सुरु भएमा रुस र युक्रेनको सिमानामा मात्र सिमित हुने अनुमान गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । यसको ताप बाल्टिक देशहरू जस्तै लाटभिया, लिथुआनिया र इस्टोनियासम्म पुग्न सक्छ। यी धेरै शान्तिप्रिय देश हुन् र तिनीहरूको सैन्य शक्ति पनि खास छैन। युद्धको अवस्थामा, यी देशहरूले सुरक्षाको लागि अमेरिका र नेटो सहयोगीहरूलाई हेर्नेछन् । तर, युद्धको अवस्थामा रुसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता अमेरिका र नाटोसँग छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
५. रुस नाटोसँग डराउँछ कि अरु केहि हो ?
रक्षा विशेषज्ञ रोजेनबर्गले न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन् – अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको प्रश्न एकदमै जायज छ । उनले गत हप्ता रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई सोधे – रुसको सिमानाको ६% मात्रै यस्तो छ कि यसले NATO देशहरूसँग साझेदारी गर्दछ। के यो तपाइँको राष्ट्रिय सुरक्षा को लागी खतरा हो? रुसले टर्की जस्ता धेरै NATO देशहरूलाई S-400 जस्ता खतरनाक मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचेको छ, अर्थात् यी देशहरूसँग यसको धेरै राम्रो सम्बन्ध छ। वास्तवमा, पुटिनको नियत युद्ध गर्ने होइन, तर घुसपैठ गर्ने र युक्रेनमा रुसी समर्थित सरकार बनाउने हो। पुटिनको विचारमा यसले नाटोलाई आफ्नो सिमानामा पुग्नबाट रोक्नेछ।
६. पुटिनले फेब्रुअरी २० सम्म युद्ध स्थगित गर्नेछन् ?
‘द डिप्लोमेट’को रिपोर्ट अनुसार रुस र चीनबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । पुटिनले पनि सदाका लागि राष्ट्रपति बन्न संविधान परिवर्तन गरे र चीनमा सी जिनपिङले पनि त्यही गरे । शीतकालीन ओलम्पिक खेलहरू फेब्रुअरी ४ देखि २० सम्म चीनमा आयोजना हुँदैछ। यदि युद्ध भयो भने, धेरै युरोपेली देशहरूले यी खेलहरू बहिष्कार गर्न सक्छन्। यसबाट चीनको छवि धमिलो हुनेछ, जिनपिङको वर्चस्व घट्नेछ। त्यसैले पुटिनले चीनलाई बदनाम गर्ने र आफ्ना मित्र जिनपिङलाई रिसाउने जोखिम नलिने विश्वास गरिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिका र नेटोले यो समय कूटनीतिक समाधान खोज्नका साथै युद्धको तयारीमा प्रयोग गर्नेछन् । चीनको मौनताको अर्थ उसले रुसलाई सन्देश दिएको पनि हो । अर्को कुरा, चीनले सधैँ प्रत्यक्ष टकराव वा युद्धको जोखिम लिँदैन। उसको ध्यान अर्थतन्त्र मात्र हो ।
७. के पुटिनले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरे ?
अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ रोबर्ट शुल्ज भन्छन्- डोनाल्ड ट्रम्पको युगलाई सम्झनुहोस् । उनको मनोवृत्तिको कारण, सबै नाटो सहयोगीहरू अमेरिकाबाट टाढा भए। जब बाइडेन आए, उनले फेरि नाटोलाई एकताबद्ध गर्न अभियान चलाए। चीनलाई हरेक मोर्चामा रोक्ने उनको उद्देश्य थियो। जब पुटिनले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजना बनाए, युरोपका हरेक देशले भविष्यमा उनीहरूलाई पनि धम्की आउने महसुस गरे। त्यसैले, पुटिनको नियतका कारण बाइडेनलाई एक प्रकारको होस भयो, किनभने नाटो देशहरू फेरि पूर्ण शक्तिमा अमेरिकी छातामुनि आए। अब खतरा चीन र रुसका लागि बढी हुनेछ, किनभने यसमा अर्थतन्त्र होस् वा सैन्य शक्ति यसमा कुनै शंका छैन । आज पनि अमेरिका र नेटोबीच प्रतिस्पर्धा छैन ।